Somalia:Diyaarado duqeeyay deegaano ka tirsan Kismaayo iyo Dawladda oo sheegtay inay kawarhayso | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > News, SOMALI NEWS, TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Diyaarado duqeeyay deegaano ka tirsan Kismaayo iyo Dawladda oo sheegtay inay kawarhayso
Somalia:Diyaarado duqeeyay deegaano ka tirsan Kismaayo iyo Dawladda oo sheegtay inay kawarhayso
Muqdisho,Somalia -sida warbaahinta dawladda iyo kuwa caalamkuba ay qoreen ayaa ah in meel aan ka fogayn magaalada Kismayo oo lagu sheegay inay saldhig u ahayd kooxda Alshabaab.
Wararka qaar ayaa sheegaya in duqayntaasi ay fuliyeen laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga ukaca ah.
Waxyeelada duqayntaas iyo cidda fulisay ayaan ilaa hadda cadayn,waxaana kasoobaxaya warar kala duwan.
Waxaana wararka qaar sheegayaan in diyaaradahaasi ay beegsadeen saldhig shabaab ay ku leeyihiin deegaan u dhaw Kismaayo oo lagu magacaabo Qandal, iyadoo warbaahinta qaarkeedna ay sheegayaan in muhaajiriin ama Ajaanib la la beegsanayay duqayntaa.
Dhinaca dawladda ayaa duqaynta sheegtay inay kawar hayeen,waxayse aysan sheegin cidda diyaaradaha lahaa iyo cidda ku waxyeelawday.
Waraka la Xiriira Dhacdadaa:
C/rashiid Xidig”Dowladdu wey ka warhaysay weerarkaasi”
Wasaaradda Gashaandhiga Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii xalay lagu qaaday deegaanka Qandale ee gobolka Jubbada hoose lagu burburiyay saldhigyo waaweyn oo ay Al shabaab ku lahaayen halakasi iyadoo dhinaca kalena faahfahin ka bixisay qasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Wasiir ku xigeenka Gashandhigga C/rashiid Maxamed Xidig oo goor u waramay Radiyo Muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay ka warheeysay howlgalkaasi, isagoo intaa raaciyay in kuwa la mid ah dhawaan laga fulin doono xarumaha Al shabaab.
“Dowladdu wa ay ka warheeysay arintaasi waxaana si wadajir ah u fuliayay ciidamada XDS iyo kuwo saaxibadood ah, waxaana la duqeeyay saldhigaasi oo Shabaabka ay u yaaleen hub iyo saanad, weyna sii socon doonaan howlgallada noocan oo kale ah, laakiin qasaaraha ka dhashay mar kale ayaan ka hadli donna”ayuu yiri C/rashiid Xidig wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaashaandhigga.
Hadalka Wasiir ku xigeenka ayaa ku soo beegmaya xilli diyaarado dagaal oo jog hoose ku socday ay maanta duqeeyeen deegaan lagu magacaabo Qandal oo ku yaalla duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose, halkaas oo la sheegay in Shabaab ay xarun ciidan ku lahaayeen isla markaana ay ku sugnaayeen horjoogayaal Ajnabi ah.
Dhinaca kale warar aynu ka helnay deegaanka Qandala oo ah goobta la duqeeyay oo 10 K.Mitir u jirta Kismaayo ayaa sheegay in weerarkaasi uu ku geeriyooday horjooge u dhashay Suudaan, oo lagu bedelay fasuul Cabdalla, wuxuu warar ah ee ku soo kordhana waan idiin soo gudbin doonna Inshaa’allaah.
Tags: Military news, Mogadishu, Muqdisho, News, SOMALIA, Soomaaliya, War in Somalia
Somalia:With new Prime Minister in place, UN urges Somalis to move forward on transition – UN News Japan:Radiation results in Fukushima City